Ny fizahan-tany Turks & Caicos Islands dia misaona ny fahaverezan'ny Gordon 'Butch' Stewart
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Tiorka sy Kaicos Vaovao Vaovao » Ny fizahan-tany Turks & Caicos Islands dia misaona ny fahaverezan'ny Gordon 'Butch' Stewart
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Tiorka sy Kaicos Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Gordon 'Butch' Stewart dia nanao fandraisana anjara tsy azo refesina ho an'ny fizahan-tany Turks & Caicos Islands amin'ny alàlan'ny Beaches Turks & Caicos Resort Villages and Spa
Androany ny indostrian'ny fizahantany any amin'ny nosy Turks & Caicos dia misaona ny fahafatesan'ny mpanorina sy ny filohan'ny Sandals Resorts International Gordon Butch Stewart.
Ny filankevi-pitantanana, ny mpitantana ary ny mpiasa ao amin'ny Birao fizahan-tany Turks sy Caicos maneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviana Stewart. Andriamatoa Stewart dia nandray anjara mavesatra tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy Turks & Caicos amin'ny alàlan'ny Beaches Turks & Caicos Resort Villages and Spa.
Amin'ny maha-toeram-pialan-tsasatra lehibe indrindra sy mpampiasa sehatra tsy miankina lehibe indrindra ao amin'ny firenena, io fatiantoka io dia tsapa manerana ny Nosy Turks sy Caicos ary tokoa ny faritra Karaiba manontolo.
Miara-miasa amin'ny indostria isika amin'ny fankalazana ny mpitarika fahitana iray izay ny fiainany sy ny lovany dia tokony hanome aingam-panahy antsika rehetra hanonofy lehibe kokoa sy hiandrandra ny fahalehibiazana. Enga anie ka hiala sasatra izy.